Resorts Sandals na -ewepụ nchegbu na atụmatụ njem n'ime ụwa nke taa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Nkwari akụ na nkwari akụ » Resorts Sandals na -ewepụ nchegbu na atụmatụ njem n'ime ụwa nke taa
Akụkọ Antigua & Barbuda • Akụkọ Bahamas Breaking • Akụkọ ọhụrụ Barbados • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Caribbean • Akụkọ Curacao • Akụkọ Grenada na -agbasa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ gbasara Jamaica • Akụkọ okomoko • News • Iwughachi • Resorts • Akụkọ Lucuc na -agbasa • Tourism • Ego njem | Atụmatụ njem • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
Ahh ... ọ bụ ebe a na -ere akpụkpọ ụkwụ!
Ndị njem na -erugharị ntakịrị, dị njikere ime atụmatụ ezumike ha, n'agbanyeghị ihe na -eme n'ụwa ugbu a. Ọ dabara nke ọma, Sandals Resorts nwere ụzọ iji obi ike mee atụmatụ ndị ahụ na echegbughị onwe ha gbasara ihe nwere ike ma ọ bụ nke agaghị eme n'ọdịnihu.
Ndị ọbịa na ebe a na -ere akpụkpọ ụkwụ nwere ike hapụ ihe na -echegbu ha mgbe ha na -ede akwụkwọ ezumike ha ma buru nnukwu nrọ.
N'ụlọ oriri na ọalsụ Sandụ Sandals, amụma “Akwụkwọ nwere ntụkwasị obi” na -enye udo nke obi, n'agbanyeghị ihe na -eme n'ụwa.
Ọbụna ruo ụbọchị ọpụpụ, akpụkpọ ụkwụ nwere obi ike kpuchie ma chekwaa ndị ọbịa ha.
Na akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ, a na -agba ndị ọbịa ume ka ha rọọ nnukwu nrọ ma mee atụmatụ maka ezumike ọdịnihu ha na ntụkwasị obi zuru oke yana ibelata nrụgide nke nkwa. Iwu amụma akpụkpọ ụkwụ nwere ntụkwasị obi na -enye ndị ọbịa ohere ịnweta nkwụghachi ego 100% ma ọ bụrụ na akagbuo ya tupu ụbọchị 31 ma ọ bụ karịa tupu ọpụpụ.
Ọzọkwa, maka obere oge, Ndị ọbịa akpụkpọ ụkwụ nwere mgbanwe ịkagbu njem ha ruo ụbọchị ọpụpụ wee nata ntaramahụhụ ịkagbu ala enwetara na asambodo njem ezumike pụrụ iche.
Kedu uru nchekwa nchekwa ịkagbu ezumike pụrụ iche?
Uru Nchedo kagbuo maka akụkụ ala nke ezumike na-enye nkwụghachi 100% ma ọ bụrụ na akagbuo opekata mpe ụbọchị 31 ma ọ bụ karịa, ma ọ bụ kagbuo ruo ụbọchị ọpụpụ, na-enweta akwụkwọ njem maka njem ọdịnihu, maka akwụkwọ ọhụrụ emere ugbu a. Ọgọstụ 31, 2021. Uru a bụ nke ezumike pụrụiche na -abụghị uru mkpuchi.
Ndị ọbịa na -ede akwụkwọ ugbu a ruo Ọgọst 31, 2021, nwere uru ọzọ n'ịmara na ha nwere ike ịkagbu maka ihe ọ bụla ma ewezuga ụbọchị Blackout dị ka akọwara n'okpuru. Enweghị ogologo oge ọnụnọ achọrọ.
Ebe ntụrụndụ & ngalaba ụlọ
Nke ahụ dị mfe ịkọwa, n'ihi na nke a na -ekpuchi ebe niile akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ. N'ihe gbasara ime ụlọ, a na-ekpuchikwa ihe ka ọtụtụ n'ime ndị ahụ belụsọ maka Oke Mmiri Bungalows & Over-The Water Villas na Sandals Royal Caribbean, Sandals South Coast, Sandals Grande St. Lucian.
Ọktoba 6 - Ọgọst 31, 2021*
Ọktoba 6 - Disemba 31, 2022*
*Oge agba ọchịchịrị itinye -
December 27, 2020 - January 3, 2021
February 13 - 19, 2021
Machị 15 - Eprel 11, 2021
Nọvemba 20, 2021 - Nọvemba 26, 2021
Disemba 18, 2021 - Disemba 31, 2021
Febụwarị 19, 2022 - Febụwarị 25, 2022
Machị 12, 2022 - Machị 26, 2022
Eprel 10, 2022 - Eprel 24, 2022
Nọvemba 19, 2022 - Nọvemba 25, 2022
Disemba 21, 2022 - Disemba 31, 2022
Nweta nkọwa ndị ọzọ ebe a.
Air Belgium na -enweta ụgbọelu mbụ ya nke Airbus A330neo
Nke mbu na Jamaica: Jakes Hotel erutela 100%...
Nduzi njem nlegharị anya Praslin na -ekerịta nchegbu ọhụrụ na njem ...
Malta njem nleta na-eme ka njem dị mfe maka ndị njem si ...
Nke a bụ ya: Alitalia na -apụ maka ụgbọ elu ikpeazụ ya
Nzaghachi gọọmentị maka COVID-19 Delta na-emebi njem ụgbọ elu ...